कोरोना भाइरससम्बन्धी प्रदेश १ को अवस्था – इन्सेक
मोरङ ०७६ चैत २६ गते
प्रदेश १ का १ सय ३७ ओटै स्थानीय तहमा कोभिड-१९ विरूद्ध अभियानहरू सञ्चालन गरिएको छ । प्रदेश १ को मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका अनुसार ०७६ चैत २६ गतेसम्ममा कोरोना भाइरससँग लड्न ४ हजार १ सय ४८ जना बस्न मिल्ने क्वारेन्टाइनको निर्माण गरिएको छ । प्रदेशभरी ४ सय ३२ वटा आइसोलेशन बेडको व्यवस्था गरिएको छ । प्रदेशभरी चैत २६ गतेसम्म ५ सय ७४ थान पीपीई (पर्सनल प्रोटेक्सन एक्युप्मेन्ट) व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण वितरण गरिएको छ । यस अवधिमा १ सय ४५ जनाको स्वाब परीक्षण गरिएको छ । जसमा १ सय ३ जनाको रिपोर्ट नेगेटिभ र ४२ जनाको रिपोर्ट आउन बाँकी रहेको छ । चैत २६ गतेसम्म प्रदेश १ मा ४६ महिला र ५ सय ३५ पुरुष सहित ५ सय ८१ जनालाई क्वारेन्टाइनमा राखिएको छ । होम क्वारेन्टाइनमा ३ हजार ३१ जना बसेका छन् । प्रदेशभरि ५ सय ६६ महिला र २ हजार ४ सय ६५ पुरुष होमक्वारेन्टाइनमा बसेको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले जनाएको छ । प्रदेशभरीमा आईसोलेसन वार्डमा दुई महिला र आठ जना पुरुष गरी १० जना भर्ना भएका छन् । आइसोलेशनमा बसेका मध्ये चैत २६ गतेसम्म २२ जना डिस्चार्ज भएका छन् ।
मोरङ जिल्ला प्रतिनिधि नेत्रप्रसाद अधिकारीका अनुसार चैत २६ गतेसम्म मोरङमा ९३ जना पुरुष र दुई जना महिला गरी ९५ जनालाई क्वारेन्टाइनमा राखिएको छ । मोरङमा ११ स्थानमा क्वारेन्टाइन निर्माण गरिएको छ । ग्रामथान गाउँपालिकाले १०, सुन्दरहरैचा नगरपालिकाले ७०, लेटाङ नगरपालिकाले १०, मिक्लाजुङ गाउँपालिकाले २ सय, रतुवामाई नगरपालिकाले ३५, बेलबारी नगरपालिकाले १५, कानेपोखरी गाउँपालिकाले ८, धनपालथान गाउँपालिकाले १०, विराटनगर महानगरपालिकाले २ सय २०, जहदा गाउँपालिकाले १०, रङ्गेली नगरपालिकाले २५, बुढिगङ्गा गाउँपालिकाले १५, केराबारी गाउँपालिकाले २०, उर्लाबारी नगरपालिकाले दुई र पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय गोठगाउँले २५ गरी ६ सय ७५ बेडको क्वारेन्टाइन निर्माण गरेको छ । मोरङमा चैत २६ गतेसम्म १ हजार १३ जना पुरुष र २ सय ३१ जना महिला गरी १ हजार २ सय ४४ जनालाई होम क्वारेन्टाइनमा राखिएको छ । मोरङमा ५७ जनाको स्वाब परीक्षण गरिएकोमा १६ जनाको रिपोर्ट नेगेटिभ र ४१ जनाको रिपोर्ट आउन बाँकी रहेको छ । रिपोर्ट आउन बाँकी रहेका सबै टाँडी क्वारेन्टाइनमा रहेकाहरू छन् । दुई जना पुरुष आइसोलेशनमा भर्ना भएको स्वास्थ्य कार्यालय मोरङका प्रमुख ज्ञानबहादुर बस्नेतले बताउनु भयो ।
भाटभटेनी सुपरमार्केटले प्रदेश १ सरकारलाई कोभिड-१९ को रोकथाम र राहतका लागि २५ लाख रुपियाँ हस्तान्तरण गरेको छ । विराटनगरको भाटभटेनीका प्रबन्धक सरिता राईले मुख्यमन्त्री शेरधन राईलाई चैत २६ गते २५ लाख रुपियाँको चेक हस्तान्तरण गर्नुभयो । मुख्यमन्त्री राईले चेकमा उल्लेखित रकम 'प्रदेश नम्बर १ कोरोना जनसुरक्षा कोष' मा जम्मा गरिने बताउनु भयो । उहाँले कोषमा हालसम्म १२ करोड हाराहारी रकम जम्मा भइसकेको बताउनु भयो ।
प्रदेश १ सरकारले स्थापना गरेको 'प्रदेश जनसुरक्षा कोष' मा जिल्ला सहकारी सङ्घ मोरङले ५ लाख ५५ हजार ५ सय ५५ रुपियाँ सहयोग गरेको छ । सहकारी सङ्घमा आवद्ध सदस्यहरूबाट रकम सङ्कलन गरी सङ्घले चैत २६ गते मुख्यमन्त्री शेरधन राईलाई हस्तान्त्रण गरेको सङ्घका अध्यक्ष डिल्ली पोखरेलले बताउनु भयो ।
विराटनगरका दुईवटा स्वास्थ्य संस्थालाई लायन्स क्लवले व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण (पीपीई) हस्तान्तरण गरेको छ । मोरङ रेडक्रस सोसाइटी र हाम्रो अस्पताललाई ५/५ थान पीपीई सेट हस्तान्तरण गरिएको लायन्स क्लव ३२५ ए वानका सेकेण्ड भाइस डिष्ट्रिक गर्भनर रेवतबहादुर कार्कीले बताउनु भयो । लायन्स क्लव ३२५ ए वानले अहिलेसम्म ५२ थान पीपीइ वितरण गरिसकेको कार्कीले बताउनु भयो । विराटनगर महानगरपालिका- २, ३, ४, ६, ७, १९ र ग्रामथान गाउँपालिका- २ का १ हजार १ सय परिवारलाई खाद्य सामग्री उपलब्ध गराइएको कार्कीले बताउनु भयो ।
पथरीशनिश्चरे नगरपालिकाले १० ओटै वडामा राहत वितरण सम्पन्न गरेको छ । चैत २६ गते वडा नम्बर १ मा १ हजार १ सय २८ परिवारलाई राहत वितरण गरिएको छ । यस अघि वडा नम्बर २ मा ४ सय ३०, ३ मा २ सय २३, ४ मा २ सय ९६, ५ मा ५ सय ५९, ६ मा ५ सय ६९, ७ मा १ सय ४७, ८ मा २ सय २२, ९ मा १ सय ८६ र १० मा ५ सय ८२ घर परिवारलाई राहत वितरण गरिएको थियो । नगरपालिकामा राहत पाउनेको कूल सङ्ख्या ४ हजार ३ सय ४२ रहेको राहत व्यवस्थापन तथा वितरण समितिले जनाएको छ । समितिले दुई जनासम्मको परिवारलाई प्रति परिवार १२ केजी चामल, दुई भन्दा बढी सदस्य रहेका परिवारलाई २५ केजी चामल तथा सबैका लागि प्रति परिवार दुई केजी दाल, एक केजी नून, एक लिटर खानेतेल र दुई ओटा साबुन राहत स्वरूप वितरण गरेको नगर प्रमुख दिलीपकुमार राईले बताउनु भयो ।
माहेश्वरी समाज विराटनगर, माहेश्वरी युवामञ्च र माहेश्वरी महिला मञ्चले चैत २६ गते विराटनगर महानगरपालिकालाई १ सय ७० बोरा चामल र २० बोरा दाल हस्तान्तरण गरेको छ । विराटनगर महानगरपालिकाले स्थापना गरेको विपद् कोषमा माहेश्वरी समाजले १ सय ७० घरपरिवारलाई पुग्ने चामल र दाल सहयोग गरेको माहेश्वरी समाज विराटनगरका अध्यक्ष नन्दकिशोर राठीले बताउनुभयो ।
सुन्दरहरैंचा नगरपालिकाले सञ्चालन गरेको विपद् व्यवस्थापन राहत कोषमा सुन्दरहरैंचा १२ मा रहेको सुकुना बहुमुखी क्याम्पसले १ लाख २ हजार १ सय ७४ रुपिया जम्मा गरेको छ । क्याम्पसले आज सुन्दरहरैँचा विपद् व्यवस्थापन राहत कोषका सदस्य तथा राहत सङ्कलनतर्फ सङ्घसंस्था समन्वय समितिका संयोजक केदारप्रसाद गुरागाईंलाई क्याम्पसमा कार्यरत शिक्षक तथा कर्मचारीहरूको एक दिनको तलब बराबरको रकम हस्तान्तरण गर्नु भयो ।
भोजपुर जिल्ला प्रतिनिधि गणेश विष्टका अनुसार चैत २६ गतेसम्म ३० जना पुरुषलाई क्वारेन्टाइनमा राखिएको छ । जिल्लामा हालसम्म १९ ओटा आइसोलेशन कक्ष निर्माण गरिएको छ । आइसोलेशन कक्षमा कसैलाई राखिएको छैन । जिल्लामा ३ सय १० जना क्षमताको क्वारेन्टाइन निर्माण गरिएको छ । जिल्ला प्रवेश गर्ने नाका तथा स्वास्थ्य चौकीहरूमा ७६ ओटा हेल्थडेक्स स्थापना गरिएको छ ।
षडानन्द नगरपालिकाले कोरोना भाइरस (कोभिड-१९) को सङ्क्रमण नियन्त्रणका लागि नगर क्षेत्रमा प्रवेशका गरेका २० जनालाई नियन्त्रणमा लिएर सिंहदेवी आधारभूत विद्यालय बोयामा निर्माण गरिएको क्वारेन्टाइनमा राखिएको नगरपालिकाले जनाएको छ । बोया घर भएका २० जना नै फेरी लगाउने जोगी रहेका छन् । उनीहरू गत फागुन १८ गतेबाट पूर्वका जिल्लाहरूमा फेरी लगाउन निस्केका थिए । सरकारले कोरोनाका कारण लक डाउन घोषणा गरेको अवस्थामा उनीहरू आएकोले आवश्यक सुरक्षाका लागि सबैलाई क्वारेन्टाइनमा राखिएको नगरपालिकाकी उपमेयर मेरीका राईले बताउनु भयो ।
पौवादुङमा गाउँपालिकाकाले कोरोना भाइरस (कोभिड-१९) बाट बच्नको लागि उच्च सतर्कता अपनाउने निर्णय गरेको छ । गाउँपालिकाले लकडाउनको अवस्थामा विभिन्न खाले सेवा/सुविधा प्रदान गर्नु साथै जनचेतनाका जगाउनका लागि गाउँपालिका अध्यक्षको संयोजकत्वमा 'कोभिड-१९ र्‍यापिड रेस्पोन्स टिम' परिचालन गर्ने भएको छ । गाउँपालिकाले आफ्नो क्षेत्रमा प्रवेश गर्न कडाई गर्दै तीन ओटा नाकामा पैदल यात्रुलाई लक्षित गर्दै हेरालु राख्ने भएको छ । गाउँपालिका प्रवेश गर्ने सिक्रे, फत्तेपुर र अधेँरी नाकामा हेरालुको व्यवस्था गरेको गाउँपालिकाले जनाएको छ । कोराना फैलिन नदिन गाउँपालिकाले विदेशबाट आएका नागरिकलाई होम क्वारेन्टाइनमा राख्ने व्यवस्था गरेको छ । स्वास्थ्य स्वयम्सेविकालाई परिचालन गरेर अन्य मानिसहरूको रेकर्ड राखेर उनीहरूको स्वास्थ्य अवस्थाको विषयमा जानकारी लिइरहेको गाउँपालिका अध्यक्ष किरण राईले बताउनु भयो । त्यस्तै गाउँपालिकाले कोरोनाको सङ्क्रमणको शङ्का लागेमा गाउँपालिकाको एम्बुलेन्समा उनीहरूलाई धरानसम्म लगेर स्वाब परीक्षण गर्ने समेत व्यवस्था मिलाएको छ । ३ हजार विपन्न परिवारलाई राहत वितरण गर्ने अध्यक्ष मेरीका राईले बताउनु भयो । गाउँपालिकाले राहत वितरणका लागि स्थापना गरेको कोषमा चैत २६ गतेसम्म ९४ लाख रुपियाँ सङ्कलन भएको छ ।
भोजपुर उद्योग वाणिज्य सङ्घ शाखा कार्यालय घोडेटारको अगुवाईमा घोडेटार बजार व्यवस्थापन तथा अनुगमन समितिको गठन गरी दैनिक उपभोग्य वस्तुहरूको मूल्य निर्धारण गरेको छ । लक डाउन गरिएको अवस्थामा सर्वसाधारण नागरिकहरूमा दैनिक उपभोग्य सामग्रीहरूको अभाव हुन नदिन तथा कालोबजारी र कृत्रिम अभाव सृजना हुन नदिने वाणिज्य सङ्घले जनाएको छ ।
उयदयपुर प्रतिनिधि भरत खड्काका अनुसार चैत २६ गते नेपाली सेनाको १८ नम्बर वाहिनी मातहतको रणशार्दूल गण वेलसोतमा कोरोना भाइरस (कोविड- १९) को आशङ्कामा राखिएका २६ जनाको चैत २६ गते स्वाब परीक्षणका लागि नमूना सङ्कलन गरिएको छ । स्वास्थ्य कार्यालय, जिल्ला अस्पताल र कटारी नगरपालिकाको स्वास्थ्य शाखाको संयुक्त टोलीले १५ दिनदेखि क्वारेन्टाइनमा बसेका उनीहरूको स्वाब सङ्कलन गरी धरानस्थित वीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा पठाएको छ । सेनाको क्याम्पभित्र बसेका २६ जनामा कुनै लक्षण देखा नपरे पनि सुनिश्चितताका लागि स्वाब सङ्कलन गरिएको स्वास्थ्य प्रमुख मोहन सुवेदीले बताउनु भयो । जिल्लामा चैत २६ गतेसम्म स्वाब परीक्षणका लागि पठाइएका १३ जनाकै स्वास्थ्य रिर्पोट नेगेटिभ आएको छ । कार्यालयले दिएको जानकारी अनुसार जिल्लाका आठ स्थानीय तहमा रहेका क्वारेन्टाइनमा बस्नेको सङ्ख्या ६७ जना रहेको छ । प्रमुख सुवेदीका अनुसार कटारी नगरपालिकामा २६ जना, चौदण्डीगढी नगरपालिकामा चार जना, त्रियुगा नगरपालिकामा आठ जना, बेलका नगरपालिकामा नौ जना, रौतामाई गाउँपालिकामा आठ जना र लिम्चुङबुङ गाउँपालिकामा १२ जनालाई क्वारेन्टाइनमा राखिएको छ । स्थानीय तहले सञ्चालन गरेका फिवर क्लिनिकमा १ सय २९ जनाले जचाएका छन् । जिल्लामा होम क्वारेन्टाइनमा बस्नेको सङ्ख्या चार महिला गरी २ सय ८४ जना पुगेको छ । त्यसमध्ये सबैभन्दा बढी बेलका नगरपालिकामा १ सय ७३ जना, त्रियुगा नपामा ७९ जना, कटारीमा चार महिलासहित २२, ताप्लिमा सात र लिम्चुबुङबुङमा तीन जना रहेका छन् । विदेशबाट आएका तर केही समस्या नदेखिएका उनीहरूलाई स्थानीय प्रशासनले घरबाहिर ननिस्कने गरी होमक्वारेन्टाइनमै राखेको छ ।
सुनसरी जिल्ला प्रतिनिधि जयकृष्ण यादवका अनुसार चैत २६ गते देवानगञ्ज गाउँपालिकाले राहत वितरणका लागि कोष स्थापना गरेको छ । लकडाउनका कारणले काममा जान नपाएकाहरूलाई खाद्यान्न वितरणका लागि कोषको स्थापना गरेको गाउँपालिकाका अध्यक्ष लालिप्रसाद मेहताले बताउनुभयो । गाउँपालिकाको बैठकमा ७० लाख रूपियाँको राहत कोष स्थापना गर्ने निर्णय अनुसार कोष खडा गरेको प्रसाशकीय अधिकृत त्रिलोचन न्यौपाने बताउनु भयो । कोषमा जनप्रतिनिधिहरूको एक महिनाको सेवा/सुविधा र कर्मचारीहरूको एक महिनाको तलबको २८ प्रतिशत रकम राहतकोषमा जम्मा गरिएको गाउँपालिकाले जनाएको छ । विपन्न तथा गरिब परिवारलाई १५ किलो चामल, एक किलो दाल, एक किलो नुन, एक लिटर खानेतेल राहत दिने गरी विवरण सङ्कलन समेत गरेको देवानगञ्ज गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष पुनीतादेवी यादवले बताउनु भयो ।
गढी गाउँपालिका-३ छिटाहामा स्थानीय सरकारले राहत वितरण गरेको छ । गढी गाउँपालिका- ३ वडा कार्यालयले चैत २६ गते सुकुम्बासी र दलितहरूलाई राहत वितरण गर्‍यो । स्थानीय सरकारको निर्णयअनुसार गढी गाउँपालिका-३ का ७ सय ५० भन्दा बढी सुकुम्बासी, दलित तथा गरिब समुदायका घरपरिवारलाई राहत वितरण गरिएको छ । पालिका र दाताको राहत सहयोगमा वडाले चैत २६ गते विपन्न परिवारलाई प्रति परिवार २० केजी चामल, एक केजी दाल, एक केजी नुन, एक लिटर खानेतेल वितरण गरेको वडाध्यक्ष टुनालाल चौधरीले बताउनु भयो ।
दुहवी नगरपालिका -१० वडाका अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले भोकभोकै बस्नु परेको गुनासो गरेका छन् । लकडाउनकाको १६ दिन बित्दा पनि १३ जना अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू र उनीहरूका परिवार समेत भोकभोकै रहेको अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको सञ्जाल अपाङ्गता समितिले जनाएको छ ।
धरान उपमहानगरपालिकामा कोरोना भाइरसको जोखिमबाट बच्न सरकारले घोषणा गरेको लकडाउनको उल्लङ्घन गर्ने क्रम बढेको छ । सामाजिक दूरी कायम गर्न र सकेसम्म घरमै बस्न भन्दै सरकारले लकडाउनको घोषणा गरेको भएपनि यसको उल्लङ्घनको क्रम बढ्दै गएको हो । जनताले लकडाउनको उल्लङ्घन गरिरहँदा केही दिनयता राजनीतिक दलहरू पनि अनुगमनको नाममा लकडाउनको उल्लङ्घन गर्दै समूह बनाएर अस्पताल, नगरपालिका, वडा र सरकारी निकायहरूमा पुग्ने गरेका छन् ।
झापा जिल्ला प्रतिनिधि नरेश खातीका अनुसार चैत २६ गतेसम्म झापाका १५ ओटा स्थानीय तहमा २७ ठाउँमा क्वारेन्टाइन निर्माण गरिएको छ । ६ सय ९६ जना क्षमता भएको क्वारेन्टाइन निर्माण गरिएको स्थानीय तहले जनाएको छ । हालसम्म क्वारेन्टाइनमा १ सय ३३ जनालाई राखिएको छ । होम क्वारेन्टाइनमा १ हजार ४१ जनालाई राखिएको छ । मेची अञ्चल अस्पतालमा आठ बेडको आइसोलेशन निर्माण गरिएको छ । जसमा सात जनालाई राखिएको छ । झापामा चैत २६ गतेसम्म सात जनाको स्वाब परीक्षण भएकोमा सबैको रिपोर्ट नेगेटिभ आएको छ । झापामा ३० जना डाक्टर, १ सय ३३ जना नर्स, २२ जना ल्याव टेक्निसियन, ८७ ओटा सुरक्षा दल, ६३ जना स्वयम्सेवक र १ सय २१ जना सहयोगी परिचालन गरिएको छ ।
कचनकवल गाउँपालिकाको विपद् व्यवस्थापन कोषमा गाउँपालिकामा रहेका दीपज्योति, पाथीभरा, दुर्गाभिट्टा, अभिमुक्तेश्वर, त्रिवेणी, पूर्व देउराली र पश्चिम देउराली सामुदायिक वनले १५ हजार रुपियाँका दरले १ लाख ५ हजार रूपियाँ सहयोग गरेका छन् । सामुदायिक वनका अध्यक्षहरूले गाउँपालिकाका अध्यक्ष अञ्जार आलमलाई सो रकम बराबरको चेक हस्तान्तरण गरेका हुन् । त्यस्तै, कर्णाली बचत तथा ऋण सहकारी संस्था बनियानीले गाउँपालिकाको कोषमा ५० हजार रुपियाँ सहयोग गरेको गाउँपालिकाका स्वकीय सचिव विकास घिमिरेले बताउनु भयो ।
हल्दीबारी गाउँपालिकाले १ हजार ६ सय ६० विपन्न घरपरिवारलाई राहत वितरण गर्ने भएको छ । गाउँ कार्यपालिका बैठकले वडा वडाबाट प्राप्त भएका घरपरिवारको नामावली अनुसार एक ६ सय ६० घरपरिवारलाई राहत वितरण गर्ने निर्णय गरिएको गाउँपालिकाका अध्यक्ष रविन्द्रप्रसाद लिङ्देनले बताउनु भयो । राहत वितरणका लागि वडा १ बाट २ सय ५६ घरधुरी, वडा २ बाट ९ सय २९ घरधुरी, वडा ३ बाट १ सय ५९ घरधुरी, वडा ४ बाट १ सय ५७ घरधुरी र वडा ५ बाट १ सय ५३ घरधुरीलाई राहत स्वरूप खाद्य सामग्री वितरण गर्न लागेको गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष डम्बर गिरीले बताउनु भयो ।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी(नेकपा) भद्रपुर नगर कमिटीले भद्रपुर नगरपालिकाको विपद् व्यवस्थापन कोषमा ५१ हजार १ सय ५१ रूपियाँ सहयोग गरेका छन् । नेकपाका नगर अध्यक्ष शिवकुमार राजभण्डारीले सो रकम बराबरको चेक नगरपालिकाका मेयर जीवनकुमार श्रेष्ठलाई हस्तान्तरण गरेको नगर अध्यक्ष भण्डारीले बताउनु भयो ।
काँकरभिट्टा खानेपानी उपभोक्ता तथा सरसफाइ संस्थाले मेचीनगर विपद् व्यवस्थापन समिति र आफ्ना उपभोक्तालाई २ लाख रुपियाँ सहयोग गरेको छ । संस्थाले नगरपालिकाको कोषमा नगद १ लाख रुपियाँ तथा आफ्नो क्षेत्रमा पर्ने पाँच ओटा वडाका लागि उपभोक्तालाई १ लाख रूपियाँ गरी १ लाख सहयोग गरेको हो । भानु बहुमुखी सहकारी संस्था लि. मेचीनगर-१० ले ५० हजार रुपियाँ, मेचीनगर बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि. मेचीनगर-९ ले ५१ हजार रुपियाँ र निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेशन (प्याब्सन) मेचीनगरले ५० हजार रुपियाँ सहयोग गरेका छन् ।
मेचीनगर नगरपालिका- ५ वडा कार्यालयले आफ्ना वडाका १ सय ३० विपन्न परिवारलाई राहत सामग्री वितरण गरेको वडा अध्यक्ष योगेन्द्र थापाले बताउनु भयो । जीवन विकास संस्थाले ६५ घर परिवारका लागि तथा सत्य साई केन्द्र मेचीनगर-५ ले १० घर परिवारका लागि राहात सामग्री उपलब्ध गराएको थियो । नव प्रगति, प्रगति, नकलवन्दा, मधु, मदन, पशुपति, जागरण लगायत १२ ओटा टोल विकास समितिका १ सय २६ घर परिवारलाई राहत सामग्री वितरण गरिएको वडा सचिव यशु लिम्बूले बताउनु भयो ।
कोभिड-१९ को सङ्क्रमण फैलिन नदिन सरकारले घोषणा गरेको लकडाउनमा भारतबाट हुनसक्ने लुकीछिपी आवतजावतलाई रोक्न झापाको सीमा क्षेत्रमा गौडैपिच्छे सुरक्षा व्यवस्था कसिलो बनाइएको छ । भारतसँग खुला सिमाना रहेको झापाको १ सय ४४ किलोमिटर क्षेत्रमा सशस्त्र प्रहरी बलले तीन दिनभित्रमा ५८ ओटा अस्थायी पोस्ट थप गरेको छ । झापाको सीमा क्षेत्रमा सशस्त्रको आठ वटा स्थायी पोस्ट पहिल्यैदेखि तैनाथ थियो । आवतजावत हुने मुख्य गौडाको पहिचान गरी ५८ ओटा नयाँ स्थानमा पाल टाँगेर अस्थायी पोस्ट खडा गरी सीमा सुरक्षालाई सुदृढ तुल्याइएको सशस्त्र प्रहरी बल २ नम्बर हेडक्वाटर भद्रपुरका सशस्त्र प्रहरी उपरीक्षक रेशमकुमार थक्सुले बताउनु भयो ।
पाँचथर जिल्ला प्रतिनिधि मङ्गल बेघाका अनुसार चैत २६ गते पाँचथरमा नौ जना महिला, ४७ जना पुरुष गरी ५६ जनालाई क्वारेन्टाइनमा राखिएको छ । एक जना पुरुषलाई घर पठाइएको छ । हालसम्म तीन महिला र ६ जना पुरुष गरी जम्मा नौ जनाको स्वाब परीक्षणका लागि धरानस्थित बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान पठाइएकोमा सबै जनाको रिपोर्ट नेगेटिभ आएको जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयले जनाएको छ ।
कुम्मायक गाउँपालिकाले कोराना सङ्क्रमण रोकथाम, नियन्त्रण र उपचार कोष स्थापना गरेको छ । सोही गाउँपालिकाको वडा-१ ले राहत वितरण गर्नु पर्ने १ सय ३१ परिवार पहिचान गरेको वडाअध्यक्ष देवेन्द्र लावतीले बताउनु भयो । ती परिवारलाई चामल २५ केजी, दाल २ केजी, नुन एक प्याकेट, खानेतेल १ लिटर, चिनी १ केजी र साबुन ४ ओटाका दरले वितरण गरिने वडाअध्यक्ष लावतीले जानकारी दिनु भयो । पाँचथर उद्योग वाणिज्य सङ्घले स्थापना गरेको 'खाद्यान्न बैङ्क' मा चैत २६ गतेसम्ममा चामल ७ हजार २ सय ५ केजी, नुन २ सय ५० केजी, खानेतेल २ सय लिटर, दाल २ सय ५० केजी, चाउचाउ ३५ कार्टुन र नगद ३ लाख २४ हजार ७ सय २० रुपियाँ जम्मा भएको सङ्घका अध्यक्ष दीपक नेपालले बताउनु भयो । पाँचथर क्लबले फिदिम बजारमा ३१ विपन्न घरपरिवारलाई जनही २० केजी चामल, दुई केजी दाल, एक लिटर तेल, दुई केजी नुन वितरण गरिएको क्लवका सचिव योगराज सेढार्इंले बताउनु भयो ।
स्वास्थ्यकर्मीहरूका लागि आवश्यकता अनुसारका स्वास्थ्य सामग्री उपलब्ध नभएको उपचारमा संलग्न डाक्टरहरूले बताएका छन् । विदेशबाट आएका सबैजना क्वारेन्टाइनमा बसेका छैनन् । बजारमा तरकारी, साग सब्जीको अभाव भएको छ । एकद्वार प्रणालीबाट राहत वितरण हुन सकेको छैन ।
सङ्खुवासभा जिल्ला प्रतिनिधि भविन कार्कीका अनुसार चैत २६ गतेसम्म सङ्खुवासभामा होम क्वारेन्टाइनमा बस्ने सङ्ख्या शुन्य रहेको छ । जिल्लामा शङ्कास्पद प्रकारका व्यक्ति नभएका कारण क्वारेन्टाइन र होम क्वारेन्टाइनमा बस्ने सङ्ख्या शुन्य भएको जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयका प्रवक्ता रोशन श्रेष्ठले बताउनु भयो । जिल्लामा अहिले सम्म १ सय १५ बेडको क्वारेन्टाइन र १६ बेडको आइसोलेशन बेड तयारी अवस्थामा छन् । २६ गते जिल्ला अस्पताल खाँदबारीमा २८ जना महिला र १९ पुरुषले वरो क्लिनिकमा जाँच गराएको जिल्ला अस्पतालले जनाएको छ । खाँदबारी नगरपालिका जनप्रतिनिधिले एक महिना बापतको सेवा सुविधा राष्ट्रिय बाणिज्य बैङ्क खाँदबारी जम्मा गर्ने भएको नगरप्रमुख मुरारी प्रसाद खतिवडाले बताउनु भयो । खाँदबारी नगरपालिकाले लक डाउनलाई कडाइका साथ पालना गर्न र एक वडादेखि अर्को वडा जान रोक लगाएको छ । लक डाउनका कारण समस्यामा परेका विपन्न तथा ज्यालादारी मजदूरलाई १० ओटै स्थानीय तहहरूले राहत वितरण गरिरहेका छन् । कोरोना भाइसरको सङ्क्रमण फैलिन नदिन स्थानीय तहले आ-आफ्नो क्षेत्रका नाका बन्द गरेर नाकामा स्वास्थ्यकर्मी सहितको हेल्प डेक्स स्थापना गरेका छन् ।
ताप्लेजुङ जिल्ला प्रतिनिधि देवराज गुरुङका अनुसार जिल्लामा निर्माण गरिएको १ सय ७४ बेड क्षमताको क्वारेन्टाइनमा राखिएका ११ जनालाई चैत २६ गते छाडिएको छ । सिरीजङ्घा गाउँपालिकामा आठ जना, फक्ताङलुङ गाउँपालिकामा दुई जना र सिदिङ्मा गाउँपालिकामा एक जना गरी ११ जनालाई राखिएको थियो । जिल्लामा १४ बेडको आइसोलेशन कक्ष निर्माण गरिएको छ । यहाँका एक नगरपालिकासहित आठ ओटा गाउँपालिकामध्ये सिरीजंघा गाउँपालिकामा चैत २० गते ६ जना र २१ गते थप दुई जना गरी आठ जनालाई राखिएको थियो । चैत २५ गते तीन जनाको स्वाब परीक्षणका लागि बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान पठाइएकोमा सबैको रिपोर्टमा नेगेटिभ पाइएको जिल्ला अस्पताल प्रमुख डाक्टर सोनिङ लामाले बताउनु भयो ।
फुङलिङ नगरपालिका वडा - २, ३, ९ र ११ वडाका आर्थिक अवस्था कमजोर परिवारलाई राहत स्वरूप चैत २६ गते प्रति परिवार १५ केजी चामल, एक केजी नुन, दुई लिटर खानेतेल वितरण गरेको छ ।
ताप्लेजुङ र पाँचथर सीमा जोडिएको काबेली नदीमा चैत १३ गते हेल्थ डेस्क स्थापना गरिएको थियो । चैत २४ गतेसम्म ४ सय ८७ जनाको स्वास्थ्य परीक्षण गरेको जिल्ला प्रशासन कार्यालयले चैत २५ गते जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
इलाम जिल्ला प्रतिनिधि कोकिला ढकालका अनुसार इलाममा आइसोलेशनका लागि थप ९ बेडको अन्तिम तयारी गरिएको छ । जिल्ला समन्वय समितिको नयाँ भवनमा यी बेड तयार भएसँगै अब इलाममा आइसोलेशनका लागि ११ बेड तयार हुने अवस्था रहेको जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जनाएको छ । इलाम अस्पतालमा यसअघि नै दुई बेड तयार गरिएको थियो । जिल्लाका संस्थागत क्वारेन्टाइनमा २७ जनालाई राखिएको छ भने होम क्वारेन्टाइनमा ३ सय ३५ जना रहेको कार्यालयका सूचना अधिकारी सफल पोर्तेलले बताउनु भयो । उहाँका अनुसार लकडाउनको पछिल्लो अवधिमा बजार, सडकलगायत सबै सुनसान छन् । कार्यालयले यो अवधिमा पनि सवारी साधन नचलाउन, घरबाट ननिस्किन र सामाजिक दूरी कायम गर्न लिखित आदेश जारी गरेको छ ।
जिल्लाका विभिन्न स्थानीय तहले विपन्न र असङ्गठित श्रमिकलाई राहत वितरण गरिरहेका छन् । माई नगरपालिका- २ ले स्थानीय साढे ३ सय परिवारलाई राहत बाँडेको छ । दुई जनासम्मको परिवारलाई १० केजी चामल, दुई केजी दाल, एक लिटर खानेतेल, एक केजी नुन र दुई ओटा साबुन वितरण गरेको छ । दुई जनादेखि चार जनासम्मको परिवारलाई १५ किलो चामल र पाँच जनाभन्दा माथिको परिवारलाई २० केजी चामलसहित अन्य राहत वितरण गरिएको वडाध्यक्ष खम्बासिंह बस्नेतले बताउनु भयो । इलाम नगरपालिकाको आकस्मिक राहत कोषमा नामसालिङ सामुदायिक विकास केन्द्रले ५० हजार, स्थानीय व्यवसायी देवेन्द्र शंकरले २० हजार, इलाम पर्यटन प्रवर्द्धन सरोकार समितिले १० हजार रुपियाँ सहयोग गरेका छन् । विभिन्न शीर्षकबाट रकमान्तरसहित इलाम नगरपालिकाको आकस्मिक राहत कोषमा अहिलेसम्म ४८ लाख रुपियाँ जम्मा भएको नगरपालिकाले जनाएको छ । इलाम नगरपालिकाको राहत लिने सूचीमा २ हजार ४ सय ९९ जना रहेका छन् । सूर्योदय नगर इसाई समाजले सूर्योदय विपद् व्यवस्थापन कोषमा ५० हजार रुपैयाँ सहयोग गरेको छ ।
तेह्रथुम प्रतिनिधि भगिश्वर लिम्बुका अनुसार चैत २५ गतेसम्म जिल्लामा १ सय २० जना क्षमता भएको क्वारेन्टाइन निर्माण गरिएको छ । हालसम्म ३२ जना क्वारेन्टाइनमा र १ सय १३ जना होम क्वारेन्टाईनमा राखिएको छ । जिल्लाको म्याङलुङ नगरपालिकामा निर्माण गरिएको क्वारेन्टाइनमा १७ जना, छथर गाउँपालिकामा २० जना होम क्वारेन्टाइनमा, फेदाप गाँउपालिकामा १५ जना क्वारेन्टाइनमा र १ सय १३ जना होम क्वारेन्टाइनमा राखिएको छ । मेन्छ्यायेम गाउँपालिकामा दुई जना र आठराई गाउँपालिकामा सात जना क्वारेन्टाइनमा राखिएको छ । जिल्ला अस्पतालमा निर्माण गरिएको १० बेडको आइसोलेशन कक्ष निर्माण गरिएकोमा दुई जनालाई राखिएको छ । उनीहरूको स्वाब परीक्षणका लागि वीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानमा पठाइएकोमा रिपोर्ट नेगेटिभ आएको छ । क्वारेन्टाइनमा राखिएका दुई जनालाई घर पठाइएको छ ।
कोरोना भाइरस सङ्क्रमण आशङ्का गरिएका बिरामीको उपचार तथा व्यवस्थापनका लागि फेदाप गाउँपालिका र आठराई गाउँपालिकामा गाउँपालिकाले कोष स्थापना गरेका छन् ।